336 qaraxyo ee 2019 ee Sweden. Sidee badan oo iyaga ka mid ah ay ahaayeen fuliyeen argagixisada?
bambooyin oo macmal ah
shows Good in ay jiraan 236 qarax oo ay ku jirto November 30, 2019 In 2018 ay ahayd 162 qaraxyadii sanadka oo dhan.
Markii hore, bambooyinka gacanta, hadda loo isticmaalo halkii bambooyin oo macmal ah hub ahaan isku dhaca.
Qaraxa ugu weyn
In Linköping, June 7, 2019 ilaa afuufeen bam ugu weyn ee sannadka.
Kharashka qarxa ahayd inta u dhaxaysa 15-20 kg. Qaraxa ayaa ahaa sidaas u xoog badan in guryo dhowr ah ayaa si xun u dhaawacan yahay.
darsin A qof ayaa ku dhaawacmay. Waa mucjiso jirin mid la dilay.
316 toogashada iyo 38 ku dhintay
Ilaa 15 December sannadkan, waxaa jiray 316 toogashada iyo 38 qof ay ku dhinteen. 2018 ahayd 306 thrusts iyo 45 ayaa lagu dilay.
Sida kaliya ee this ka adkaan waa in dadka aad u hesho si aad u maqasho ku saabsan Ciise si ay u heli kartaa isaga oo aanay u badbaadin.
Waxaan u baahan nahay inuu ku tukado, in Ciise soo dirayaa inuu shaqaalayaal beertiisa u soo gelin.
Marka dadku ay helaan Ciise noqdo furtay oo loo bedelay.
Sidaas daraaddeed halkaas oo cabsida xaq u socday waxaa jiri doona nabad.